एक अभूतपूर्व राष्ट्रपतिको सल्लाह केवल ईसाई र जर्मनहरूको लागि मात्र होइन
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » अहिले प्रचलनमा » एक अभूतपूर्व राष्ट्रपतिको सल्लाह केवल ईसाई र जर्मनहरूको लागि मात्र होइन
ब्रेकि European युरोपेली समाचार • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • संस्कृति • जर्मनी ब्रेकिंग न्यूज • सरकारी समाचार • समाचार • मान्छे • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा
डिसेम्बर 25, 2021
राष्ट्रपति फ्रान्क वाल्टर स्टाइनमर र उनकी पत्नी एल्के बुडेनबेन्डर
आजको क्रिसमस ठेगाना
बर्लिनको श्लोस बेल्लेभ्युमा जर्मन संघीय राष्ट्रपति फ्रान्क-वाल्टर स्टेनमेयरद्वारा सम्पूर्ण विश्वले ध्यान दिनुपर्ने सन्देश हो। सन्तुलित, अत्यावश्यक र विश्वव्यापी मार्ग दर्शन र वास्तविकताको भावनाका साथ राज्य प्रमुखद्वारा।
फ्रान्क-वाल्टर स्टेनमेयर संघीय गणतन्त्र जर्मनीका बाह्रौं राष्ट्रपति हुन्:
मेरा साथी जर्मनहरू, मेरी श्रीमती एल्के बुडेनबेन्डर, र म तपाईंहरूलाई यो क्रिसमसको हार्दिक शुभकामना पठाउँछु।
तपाईं यी दिनहरू एक्लै बिताउँदै हुनुहुन्छ वा परिवारसँग, चाडपर्वको अपार्टमेन्टमा वा नाइट सिफ्टमा, नर्सिङ होमको कोठामा, वार्डमा नर्स वा डाक्टरको रूपमा, वा प्रहरी वा दमकल स्टेशनमा ड्युटीमा - जहाँ भए पनि। हुन: हामी तपाइँ सबैलाई खुशी र धन्य क्रिसमसको कामना गर्दछौं!
जब हामी गत वर्षलाई फर्केर हेर्छौं, हामी धेरै कुरा देख्छौं जसले हामीलाई चिन्ता गर्छ, धेरै, जसले हामीलाई डराएको थियो। हामी गर्मीमा विनाशकारी बाढी सम्झन्छौं। हामी अफगानिस्तानबाट घर फर्केका हाम्रा सिपाहीहरूलाई सम्झन्छौं, र पीडा र भोकमरीको बीचमा त्यहाँ बसेका मानिसहरूलाई पनि सम्झन्छौं। हामी हाम्रो अशान्त संसारका धेरै क्षेत्रहरू र विशेष गरी पूर्वी युरोपबाट सुनेका समाचारहरूबाट चिन्तित छौं।
र तैपनि यो गत वर्षले हामीलाई धेरै आशा दियो।
म बाढीपीडितहरूप्रतिको ठूलो ऐक्यबद्धता, चन्दा र विशेष गरी ठूलो व्यावहारिक सहयोगको बारेमा सोचिरहेको छु। म वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न प्रतिबद्ध धेरै युवा र अत्याधिक युवाहरूको बारेमा सोचिरहेको छु। र म महत्त्वपूर्ण चुनावमा मतदान गर्ने सबैको बारेमा सोच्दै छु, र पारस्परिक सम्मानको वातावरणमा लोकतान्त्रिक शक्ति हस्तान्तरणको बारेमा सोच्दै छु।
देशको सेवामा आफैंले महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको नयाँ संघीय सरकारलाई अहिले धेरैले उत्सुकता र आशाका साथ हेरिरहेका छन् ।
तथापि, सबै भन्दा माथि, म हाम्रो समाजका सबै कुनाहरूमा स्वयंसेवकहरूले देखाएको प्रतिबद्धताको बारेमा सोच्दै छु। पृष्ठभूमिमा, दिन भित्र, दिन बाहिर धेरै गरिन्छ; धेरै मानिसहरू आफ्नो आस्तीन रोल गर्दै छन् र निश्चित रूपमा मद्दत गर्दै छन्। दिन प्रतिदिन तिनीहरू सबैले हाम्रो समाजको सकारात्मक कपडा बनाउने र यसलाई एकसाथ समात्ने नेटवर्क बुन्छन्।
हो, र त्यसपछि त्यहाँ COVID-19 छ।
चाँडै, यो महामारीले हाम्रो जीवनमा - यहाँ र विश्वभर हावी हुन थालेको दुई वर्ष हुनेछ।
विरलै हामीले हाम्रो मानव जीवनको जोखिम र भविष्यको अप्रत्याशिततालाई प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गरेका छौं - अर्को महिना, अर्को हप्ता, वास्तवमा अर्को दिन पनि। भर्खरै, एक पटक फेरि, हामीले भाइरसको नयाँ संस्करणबाट आफूलाई बचाउनको लागि ठूलो प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेका छौं।
तैपनि हामीले यो पनि सिकेका छौं कि हामी शक्तिहीन छैनौं। हामी आफूलाई र अरूलाई बचाउन सक्छौं। म खुसी छु कि विशाल बहुमतले खोपको सम्भावनालाई पहिचान गरेको छ। कति ठुलो पीडा, कति मृत्युलाई यसले यस बिन्दुसम्म रोकेको छ!
जनताको स्वास्थ्य र जीवन रक्षाको लागि हाम्रो राज्यले यस्तो जिम्मेवारी विरलै पाएको छ?
यो जिम्मेवारीलाई न्याय गर्न विशेषज्ञ वैज्ञानिक, डाक्टर र नर्सहरू, जिम्मेवार कानून प्रवर्तन अधिकारीहरू, र सार्वजनिक निकायहरूमा कर्मचारीहरू चाहिन्छ। उहाँहरु सबैले सक्दो गरिरहनुभएको छ । र तिनीहरू सबै नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्दैछन्, गलत साबित भएका अनुमानहरू सुधार गर्दै, र उपायहरू अनुकूलन गर्दै। जनताले बनाउन सक्छन्
गल्तीहरू, तर तिनीहरू पनि सिक्छन्।
त्यसैले राज्यको दायित्व छ र त्यसले काम गर्नुपर्छ, तर राज्यको मात्र होइन।
राज्यले हाम्रो ठाउँमा सुरक्षात्मक मास्क लगाउन सक्दैन, न त पाउन सक्छ
हाम्रो तर्फबाट खोप।
होइन, यो हामी प्रत्येक र प्रत्येकले आफ्नो भाग गर्न भर पर्छ!
म मेरो हृदयको तलबाट विशाल, प्रायः मौन, हाम्रो देशका बहुसंख्यकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले महिनौंदेखि सावधानीपूर्वक र जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेका छन्। किनभने तिनीहरूले महसुस गरेका छन् कि पहिले भन्दा धेरै, हामी एक अर्कामा निर्भर छौं - म अरूमा, र अरूहरू ममा।
निस्सन्देह, यहाँ विवादहरू छन्।
निस्सन्देह, त्यहाँ अनिश्चितताहरू र डरहरू छन्, र तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो देशमा त्यसो गर्न कसैले रोक्दैन। महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि हामी यी मुद्दाहरूको बारेमा कसरी कुरा गर्छौं - हाम्रो परिवारमा, हाम्रा साथीहरूसँग, सार्वजनिक रूपमा। हामी दुई वर्ष पछि निराशा बढ्दै गएको महसुस गर्छौं; चिडचिडापन व्यापक छ; हामी बढ्दो रूपमा अलगाव र, अफसोस, खुला आक्रामकता देखिरहेका छौं।
यो सत्य हो कि लोकतन्त्रमा हामी सबैको एउटै विचार हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर म तपाईंलाई यो सम्झन आग्रह गर्दछु: हामी एक देश हौं।
जब महामारी समाप्त हुन्छ, हामी अझै पनि एक अर्कालाई आँखामा हेर्न सक्षम हुन आवश्यक छ। र जब महामारी समाप्त हुन्छ, हामी अझै एक अर्कासँग बस्न चाहन्छौं।
महामारी एक्कासी अन्त्य हुने होइन । यसले हामीलाई अझै लामो समयसम्म कब्जामा राख्नेछ। र यसले हामीलाई पहिले नै परिवर्तन गर्दैछ, हाम्रो दैनिक भाषामा पनि यसको छाप छोड्दैछ। हामीले नयाँ सर्तहरू - जस्तै "घटना" वा "2G+" सँग परिचित हुनुपरेको मात्र होइन। होइन, हाम्रा बहुमूल्य पुराना शब्दहरूले पनि तत्काल नयाँ गुण लिइरहेका छन्।
उदाहरण को लागी, भरोसा को अर्थ के हो? अन्धो विश्वास होइन, जाहिर छ। तर के यसको मतलब मेरो आफ्नै शंकाहरू पूर्ण रूपमा हटाइएको छैन भने पनि सक्षम सल्लाहमा भर पर्नु पनि हुन सक्छ?
स्वतन्त्रता को अर्थ के हो?
के स्वतन्त्रता प्रत्येक नियमको विरुद्धमा ठूलो विरोध हो? वा कहिलेकाहीँ अरूको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न म आफैंमा प्रतिबन्धहरू लगाउँछु भन्ने पनि होइन?
जिम्मेवारीको अर्थ के हो?
के हामी केवल यसो भन्छौं: "यो त्यस्तो चीज हो जुन मानिसहरूले आफैले निर्णय गर्नुपर्छ"?
के यो मेरो निर्णयले वास्तवमा अन्य धेरै मानिसहरूलाई पनि असर गर्छ भन्नु साँचो होइन?
स्वतन्त्रता, विश्वास, जिम्मेवारी: तिनीहरूको अर्थ के हो जुन कुरामा हामीले सम्झौतामा पुग्नु पर्छ - फेरि भविष्यमा पनि, र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण जस्ता अन्य प्रमुख मुद्दाहरूमा पनि। यहाँ पनि, सबैलाई मनाउने कुनै पनि एकल सही जवाफ हुनेछैन।
बरु, हामी बारम्बार नयाँ सम्झौतामा पुग्नु पर्छ। र म पक्का छु कि हामी सहमतिमा पुग्न सक्छौं।
आखिर, हामीले धेरै पटक प्रमाणित गरिसकेका छौं कि हामी त्यसो गर्न सक्छौं।
मेरा साथी जर्मनहरू, यो 50 भन्दा बढी वर्ष पहिले क्रिसमसमा थियो कि मानिसहरूले पहिलो पटक चन्द्रमा परिक्रमा गरे। हामीमध्येका ठूला व्यक्तिहरूले तस्बिरहरू सम्झन सक्छन्: त्यहाँ अन्तरिक्षमा, सबैभन्दा ठूलो मानव प्रगतिको त्यो क्षणमा, हाम्रो सानो, कमजोर पृथ्वी पहिले कहिल्यै देखिएन। त्यहिँबाट सबै प्रगति सुरु भएको थियो, र यहाँ हामी सबै बाँचिरहेका छौं, हाम्रा बोझ र आशाहरू, हाम्रा दुःख र आनन्दका साथ।
त्यस अवसरमा, तीन अपोलो 8 अन्तरिक्ष यात्रीहरूले सृष्टिको बाइबलीय कथाको सुरुवात पढेर सुनाए - र उनीहरूले आफ्नो क्रिसमस सन्देशलाई "भगवानले तपाईं सबैलाई राम्रो पृथ्वीमा आशिष् दिनुहोस्" भन्ने शब्दहरूका साथ समाप्त गरे।
मेरा साथी जर्मनहरू, यही नै मेरी श्रीमती र म तपाईं र हाम्रो लागि चाहन्छौं: यो हामी सबैको लागि राम्रो पृथ्वी बनिरहनेछ, हामी सबैको लागि यहाँ राम्रो भविष्य हुनेछ। क्रिश्मसको शुभ कामना!
फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर को हो?
फ्रान्क-वाल्टर स्टेनमेयरको जन्म5जनवरी 1956 मा डेटमोल्ड (लिपे जिल्ला) मा भएको थियो। उनले एल्के बुडेनबेन्डरसँग 1995 देखि विवाह गरेका छन्। तिनीहरूको एक छोरी छिन्।
ब्लोम्बर्गको व्याकरण स्कूलमा पढेपछि र दुई वर्षको सैन्य सेवा गरेपछि, फ्र्याङ्क-वाल्टर स्टाइनमेयरले 1976 मा गिसेनको जस्टस लिबिग विश्वविद्यालयमा कानूनमा आफ्नो डिग्री लिन थाले। 1980 बाट, उनले राजनीतिशास्त्र पनि पढे। उनले 1982 मा पहिलो राज्य कानून परीक्षा पास गरे र त्यसपछि फ्रान्कफर्ट एम मेन र गिसेनमा आफ्नो व्यावहारिक कानूनी प्रशिक्षण गरे। 1986 मा दोस्रो राज्य कानून परीक्षा पास गरेपछि उनले यो प्रशिक्षण पूरा गरे, त्यसपछि उनले गिसेनको जस्टस लिबिग विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक कानून र राजनीति विज्ञानको अध्यक्षमा अनुसन्धान फेलोको रूपमा काम गरे। 1991 मा, उहाँले आफ्नो शोध को लागी कानून मा एक डॉक्टरेट सम्मानित गरियो "घरविहीन नागरिकहरू - आवास प्रदान गर्ने कर्तव्य र बस्ने ठाउँको अधिकार। घरबारविहीनतालाई रोक्न र हटाउन राज्यको हस्तक्षेपको परम्परा र सम्भावनाहरू" .
सोही वर्ष, फ्रान्क-वाल्टर स्टेनमेयर ह्यानोभरको ल्यान्ड लोअर सक्सोनीको स्टेट चान्सलरीमा गए, जहाँ उनले मिडिया कानून र नीतिका लागि डेस्क अफिसरको रूपमा काम गरे। 1993 मा, उहाँ गेर्हार्ड श्रोडरको कार्यालय प्रमुख बने, भूमि तल्लो सक्सोनीका मन्त्री-राष्ट्रपति। त्यसपछिको वर्ष उनी नीति निर्देशन र अन्तरमन्त्रालय समन्वय तथा योजना विभागको प्रमुखमा नियुक्त भए। दुई वर्षपछि, उहाँ राज्य सचिव र भूमि तल्लो सक्सोनीको राज्य चान्सलरीको प्रमुख हुनुभयो।
1998 मा, उहाँ संघीय चान्सेलरीमा राज्य सचिव र संघीय खुफिया सेवाहरूको लागि संघीय सरकार आयुक्त नियुक्त हुनुभयो। उनले सन् १९९९ देखि संघीय चान्सलरीको प्रमुखको रूपमा पनि काम गरेका थिए। फ्र्याङ्क-वाल्टर स्टाइनमेयर २००५ मा संघीय विदेश मन्त्री नियुक्त भएका थिए र २००७ बाट डेपुटी चान्सलर पनि थिए। सन् २००९ मा उनले ल्यान्ड ब्रान्डनबर्गको निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सिट जितेका थिए। जर्मन Bundestag को एक सदस्य। जर्मनीको बुन्डेसटागमा रहेको सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जर्मनीको संसदीय समूहले उनलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो । चार वर्षपछि, उहाँ दोस्रो पटक संघीय मामिला मन्त्री हुनुभयो, र जनवरी 1999 सम्म यो भूमिकामा सेवा गर्नुभयो।
फ्रान्क-वाल्टर स्टेनमेयरले धेरै पुरस्कार र पुरस्कारहरू प्राप्त गरेका छन्, जसमा बुझाइका लागि इग्नाट्ज बुबिस पुरस्कार, राजनीतिक संस्कृतिको लागि युरोप पुरस्कार, युरोपेली समझको लागि बोस्फोरस पुरस्कार, विली ब्रान्ड पुरस्कार, टुट्जिङको इभान्जेलिकल एकेडेमीको सहिष्णुता पुरस्कार र इक्यूमेनिकल समावेश छन्। Bavaria मा क्याथोलिक एकेडेमी को पुरस्कार। उनलाई प्याडरबोर्न युनिभर्सिटी, जेरुसेलमको हिब्रू युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटी अफ पिरायस र युराल फेडरल युनिभर्सिटी अफ एकटेरिनबर्गले मानार्थ डक्टरेट उपाधि दिएका छन्। उहाँ सिबिउ र रेम्स सहरका मानद नागरिक पनि हुनुहुन्छ।
फ्रैंक-वाल्टर स्टेनमेयर फेडरल रिपब्लिक अफ जर्मनीको १२ फेब्रुअरी २०१७ मा १२ औं राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भएका थिए।